Iindaba-Inkampani yethu yanikwa iSatifikethi seShishini esiPhezulu seSizwe ngoDisemba 2, 2019.
Inkampani yethu yanikwa iSatifikethi seShishini esiPhezulu seSizwe ngoDisemba 2, 2019.
Inkampani yethu yanikezelwa iSatifikethi seShishini esiPhezulu seSizwe ngoDisemba 2, 2019.
“Inzululwazi ibalulekile ekuqhubeni phambili kwezophuhliso, ibinzana elithi“ ishishini elitsha neliphezulu kwitekhnoloji ”libhekisa kumalungelo ezinto ezizimeleyo ezizimeleyo ezenziwe ngophando oluqhubekayo kunye nophuhliso kunye nokuguqulwa kwempumelelo kwezobuchwephetsha kwi“ New and High Technology Field exhaswa yi uRhulumente ”. Kwaye kwesi siseko sokwenza imisebenzi yeshishini. Lulwazi olunzulu, ulwazi olunzulu ngetekhnoloji. ”
Eli lizwe lihlonitshwa kakhulu kwaye liyayixhasa inkululeko yethu ezimeleyo, ekwabonisa ukuba inkampani yethu lishishini elinokukhula okuphezulu kunye nesibonelelo esihle soqoqosho.
Innovation yeyona nto ibalulekileyo ekuqhubeni amashishini. Siza kulandela umgaqo wobuchule obuzimeleyo kunye nohlaziyo oluzinzileyo, kwaye sihlala siphucula amandla ethu kwezenzululwazi kunye nezobuchwepheshe kunye nophuhliso lwetekhnoloji ephezulu.
Kwixesha elizayo, akufuneki sinyanzelise kuphela ukuveliswa kwetekhnoloji, kodwa sinikele ingqalelo kwishishini elitsha. Ukuyilwa kwamashishini yinxalenye ebalulekileyo yolawulo lweshishini Yinto ephambili ethatha isigqibo kwicala lophuhliso, isikali kunye nesantya senkampani. Ukusuka kulawulo lwenkampani iphela ukuya ekusebenzeni kweshishini elithile, ubuchule beshishini buqhuba kuwo onke amasebe nazo zonke iinkcukacha. Ukuyilwa kwamashishini kubandakanya ukwenziwa kwezinto ezintsha, ubuchwepheshe, ukuvelisa izinto ezintsha, ubuchule bokuyila kunye neminye imiba yengxaki, kwaye yonke imiba yengxaki ayikhe yaqwalaselwa ngomba othile wobugcisa, kodwa kukujonga ukukhula kwalo lonke ishishini, kuba Ukutsha kwezinto zonke izinto kunxulumene kakhulu.
Ixesha Post: Dec-02-2019